🥇 Ukuzenzakalela kwe-accounting kwesitudiyo sokuthunga
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 362
Ividiyo ye-accounting automation yesitudiyo sokuthunga
Oda i-accounting automation yesitudiyo sokuthunga
Ukuhlelwa kwesitudiyo sokuthunga kuyinqubo eyinkimbinkimbi, ngoba ukubalwa kwezimali okuthembekile, okuphelele nokusheshayo kuyingxenye edingekayo yenqubo yonke yenhlangano kusuka ekwethulweni kuya ekukhiqizeni. Isitudiyo sokuthunga ibhizinisi elithile elidinga ukusetshenziswa kwemali ebonakalayo kwezimali: ezemali, ezabasebenzi nezinto ezibonakalayo, futhi kudinga ukuhlela ngokucophelela nokuhlela okucacile. Kubalulekile ukuqonda ukuthi i-accounting automation yesitudiyo sokuthunga kufanele iqale ngokulungiselela kahle nokutadisha ngokujulile imininingwane yaleli bhizinisi. Isitudiyo sokuthunga sihlinzeka ngamathuba angapheli wobuciko kanye nemali engenayo ezinzile. Ukuze umelane nomncintiswano, udinga ukuthi ungagcini ngokuthola imishini nabasebenzi, kepha futhi ube nobuciko ekwakheni imikhiqizo. Futhi ukuze kungabikho lutho olukuphazamisa ngokuphelele kubuciko futhi ngasikhathi sinye konke kubhekwe futhi akukho okushiywe ngaphandle, isoftware yethu, eyenzelwe umsebenzi wesitudiyo sokuthunga, idalwa.
Ukusetha ukubalwa kwezimali zokukhiqiza kudinga ubuchwepheshe, ngoba ukwenza lokhu kuyadingeka: ukuqinisekisa ukuhleleka estudiyo, ukuthuthukisa izidingo nokulandela ukugeleza kwedokhumenti eyinhloko, lapho kwenziwa khona imibiko yezezimali nezinto ezibonakalayo, kwenziwa ukuhlaziywa kwezinkomba , lapho konke lokhu kubhekwa ngendlela yenhlangano yokubalwa kwezimali - uhlelo lwe-USU-Soft automation lwesitudiyo sokuthunga. Lapho kuhlelwa izitudiyo zokuthunga nokwenza imikhiqizo, ngisho ochwepheshe abanolwazi kanye nezazi zezomnotho abaphathi njalo ukubona kusengaphambili zonke izici zokukhiqiza; kodwa-ke, lapho kwenziwa i-accounting automation yesitudiyo sokuthunga futhi usebenzisa i-USU-Soft, zonke izinto ezivelayo zingabonakala kusengaphambili. Ekuhleleni umsebenzi wesitudiyo sokuthunga, kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukusebenza kwesigqi sayo yonke iminyango, ukulayishwa kwabo okuhlangene nokusebenza kohlelo lokuzenzekelayo, nakho okunikezwayo esicelweni sethu.
Usebenzisa uhlelo lwe-USU-Soft accounting, ungahle ulawule kalula zonke izinqubo zokukhiqiza ukuthunga, kusukela ekuhleleni ukwenza inzuzo ngesisekelo se-oda eligcwalisiwe. Futhi, ngosizo lohlelo lwe-accounting ezishintshayo zesitudiyo sokuthunga, ungabona umsebenzi wesisebenzi ngasinye futhi, ngokufanele, ukwandise ukukhiqizwa kweworkshop yakho, uyakwazi ukugqugquzela abasebenzi abavelele ngomklomelo, futhi njengoba yazi, ukugqugquzela kuyinjini yenqubekela phambili. Futhi ukulawula ingxenye yezindleko ezinjengezinto ezibonakalayo, ngoba indawo yokusebenzela inalo uhlu olukhulu lwezinto zokusetshenziswa (izindwangu, izesekeli), ukusetshenziswa kwazo okuthinta izindleko zomkhiqizo ngamunye futhi, ngokufanele, inzuzo. Futhi uhlelo lwe-accounting automation lwesitudiyo sokuthunga luzokwazisa ukuthi indawo yokugcina impahla iphelelwa yizinto zokwakha, ngenxa yokuthi i-atelier yakho izosebenza kahle ngaphandle kokungabikho kwesikhathi sokuphumula. Ama-oda wamakhasimende azokwenziwa ngaphandle kokulibala, wena namakhasimende akho enizojabula ngawo.
Kuhlelo lokuzenzakalela lokuhlela ukubalwa kwezitudiyo, ungagcina imininingwane yamakhasimende, ekuvumela ukuthi ubone ukuthi yiliphi ikhasimende elenze ama-oda amaningi. Ngokuya ngemininingwane etholakele, ungabanikeza uhlelo oluguquguqukayo lwezaphulelo noma uklomelise amakhasimende ajwayelekile anjalo ngezipho, Njengoba wazi, wonke umuntu uyawathanda futhi lawa makhasimende azohlala enawe njalo, lokho okuheha amakhasimende amasha. Ukuzenzakalela kokukhiqizwa kokuthungwa okususelwa kupulatifomu yohlelo lwe-USU-Soft kukuvumela ukuthi unikeze ngokushesha imininingwane edingekayo ukwenza izinqumo zokuphatha.
Lapho sikhuluma ngokuzenzekelayo kwesitudiyo sokuthunga, kubalulekile ukuthi ungakhohlwa ngesidingo sokwenza inqubo yokulawula ibe sobala ngangokunokwenzeka. Ngohlelo lwethu lwe-accounting lokuzenzekelayo ungazi zonke izenzo ezenziwa ngabasebenzi bakho, njengoba ngamunye wabo enikezwa iphasiwedi nokungena ngemvume ukufaka i-akhawunti yabo. Ngakho-ke, uhlelo lwe-accounting lwe-automation lusindisa futhi kamuva lukhombise futhi luhlaziye zonke izinyathelo ezenziwe ngumsebenzi. Lokhu kuyasiza ngezizathu eziningana. Okokuqala, uyazi ukuthi ungakanani umsebenzi owenziwa yilungu labasebenzi futhi uyakwazi ukubala amaholo afanele. Okwesibili, uyazi ukuthi ngubani osebenza ngendlela engcono kakhulu yokukwazi ukuklomelisa abasebenzi abasebenza kanzima futhi ngaleyo ndlela bathuthukise ukusebenza kwabo. Okwesithathu, uyazi futhi ukuthi ngubani ongakhiqizi futhi ongakwazi ukwenza imisebenzi yakhe yansuku zonke ngesikhathi. Lokhu kubaluleke kakhulu, njengoba wazi ukuthi kufanele ukhulume nobani ukwenza isimo sibe ngcono.
Uhlelo lulungisa isilinganiso sabasebenzi abasebenza kanzima nabasebenza kanzima kakhulu futhi sethula lezi zibalo ngendlela yamagrafu afanelekile, ukuze ungachithi isikhathi esiningi uzama ukuqonda ukuthi lo mbiko uthini. Lo mgomo usetshenziswa kuzo zonke izici zohlelo lokubalwa kwemali lokuzenzakalela - kulula, kuyashesha futhi kuneqhaza ekukhuleni kwenhlangano yakho. Kunezinhlangano eziningi ezinqume ukufaka uhlelo lwethu lwe-accounting lwe-automation futhi azange zizisole ngokwenza njalo! Basithumela impendulo yabo, esiyithumele kuwebhusayithi yethu esemthethweni. Ngakho-ke, ungazihlolela ukuthi uhlelo lwethu luyaziswa futhi lwaziswa ngamanye amabhizinisi aphumelelayo emhlabeni wonke.
Kunezicelo eziningi ezinikezwa mahhala kwi-Intanethi. Qaphela lapho uthatha isinqumo sokusebenzisa eyodwa yazo, ngoba ngokuqinisekile kuzoba uhlelo lokuzenzekelayo lwe-accounting lwekhwalithi ephansi, ngaphandle kosizo lobuchwepheshe. Ungamangali ukwazi ukuthi manje kumahhala ekugcineni, ngoba amasistimu anjalo ngokuvamile ayabiza ngemuva kokusebenzisa inguqulo yawo yedemo yamahhala. Sithembekile kuwe - sinikela ukusebenzisa inguqulo yethu yedemo yamahhala bese uthenga inguqulo ephelele, okudingeka uyikhokhe kanye kuphela.